သုတေသနလေ့လာဆန်းစစ်သူ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » သုတေသန Analyst,
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: သုတေသန Analyst,
ရာထူး: သုတေသန Analyst,
ကုမ္ပဏီ: အဆိုပါ Burgess Group မှ LLC
Location: အာလေဇန္ VA US
Burgess ကိုသင် ?? ကမ္ဘာကြီးကိုအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိပါအဘယ်ကြောင့်
America မှာနှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများငွေပေးချေမှုညာဘက်ရဖို့ကြိုးစားနေဒေါ်လာနာရီနှင့်ဘီလီယံသန်းပေါင်းများစွာဖြုန်းတီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် software နှင့်တိကျမှန်ကန်ဒေတာအကူအညီနဲ့ clients များ, ဒီစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ဖယ်ရှားပစ်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်နောက်ဆုံးမှာ, စောင့်ရှောက်မှု၏အချက်မှာလူများအတွက်ပိုပြီးသေသေချာချာများကိုကျွေးမွေး။
ခေါက်-On နှင့်အတူ America မှာလူတိုငျးအတှကျဆိုးကျိုးများဒီ gnarly ပြဿနာကိုပြုပြင်တာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ခြုံငုံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကတိုးတက်လာဖို့ကူညီခြင်းလိမ့်မည် ?? ။
သငျသညျဖန်တီးမှုလွတ်လပ်မှုတစ်တန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါ ?? ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလှူငှမြေားကိုတကယ်ကိစ္စကျနော်တို့တစ်ကြီးထွားလာကုမ္ပဏီပြန်လည် ?? တော်မူမည် သင်ပြုသမျှကိုရေတွက်ပါလိမ့်မယ်။
ရာထူးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဆိုပါ Burgess သုတေသန Analyst, ရာထူးအလွန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေ့လာသုံးသပ်သူသို့မဟုတ်သုတေသနပြုလေ့လာဆန်းစစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ပုံမှန်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကျွမ်းကျင်မှု set ကို, မလိုအပ်သည်။
တစ်ဦး Burgess သုတေသန Analyst, အမျှ, သင်လိုအပ်ချက်စတင်ဖွဲ့စည်းထံမှဆော့ဖ်ဝဲကိုလွှတ်ပေးရန်, ငါတို့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်, Two-ရက်သတ္တပတ် Sprint ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသံသရာ၏တစ်ဦးချင်းစီကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မောင်းနှင်။
လိုင်းန်ဆောင်မှုများ, အရည်အသွေးအာမခံချက်, အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: မေးခွန်းများကိုအားလုံးဌာနများအနေဖြင့်မူဝါဒအားသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအကြောင်းကိုထသောအခါသင်သွားလာရင်းမှလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း - တစ် Burgess သုတေသန Analyst, အမျှ, သင်တို့သည်ငါတို့၏ SDLC တစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦး Focal Point သည်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦး Burgess သုတေသန Analyst, အမျှ, သင်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဝါဒကကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာသည်။ သငျသညျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အနက်ကိုဘော်ပြ Medicare / Medicaid ကိုဒေတာနှင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုကြွလာသောအခြားသောမူဝါဒ: အစီရင်ခံစာများ, ပံ့ပိုးပေးစာပမြေား, ည့်စွက်ချက်များ, etc
ဤသည်အခန်းကဏ္ဍကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးချေမှု၏အခြေခံသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေ့ရမယ်။ အဆိုပါ Knowledgebase Burgess စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြားခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍအပါအဝင်ကုမ္ပဏီ (နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း) ၏အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးဖွင့်လှစ်။
အဘယ်အရာကိုအခန်းကဏ္ဍကို (တာဝန်များ) ကပါဝင်ပတ်သက်
သငျသညျလျင်မြန်စွာထုတ်ကုန်ဖှံ့ဖွိုးတိုး / ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏သံသရာစတင်နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, နေ့စဉ် transmitter, စာစောင်များကို, မူဝါဒလက်စွဲစာအုပ်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင် Medicare မူဝါဒအဖတ်ပါနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
သငျသညျပြန်လည်သုံးသပ်, လေ့လာမှု, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင့်အစိုးရများနှင့်အခြားမူဝါဒအအေဂျင်စီများထံမှရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ် data ကို verify ။ ဒါက 1,200 စာမျက်နှာ Medicare စိုးမိုးရေးသို့မဟုတ်ထပ်မံတင်ပို့ခဲ့ပြီးကြောင်းဆရာဝန်တစ်ဦးအခကြေးငွေအချိန်ဇယား (Data ဖိုင်) ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်ရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျတိကျတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလိုအပ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့တည်ဆဲ clients များထိတွေ့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါ
ကျနော်တို့ ?? ပြန်-အဆုံးရေး ?? စသည်တို့ကိုကျနော်တို့ငွေပေးချေမှုတည်းဖြတ်တည်ဆောက်ရန်ဖတ်အလွန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဝါဒ, မှန်ကန်သောနိုင်တဲ့ coding တည်းဖြတ်, စျေးနှုန်း algorithms ကနေဆင်းသက်လာလိုအပ်ချက်များကို
ရှုပ်ထွေးသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်ကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်ထုတ်သက်သေပြဖို့အသေးစိတ် Excel ပုံသေနည်း Create
ကျနော်တို့ပြင်ဆင်ရန်နှင့်မူဝါဒလိုအပ်ချက်နဲ့ဆက်စပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်များသို့ data တွေကိုမိတ်ဆက်ပေး
ကျွန်တော်တို့သည်လိုအပ်ချက်များကိုရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ development team နှင့်အတူကန်-ချွတ်အစည်းအဝေးများအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမေးခွန်းများကိုမေးရန်အိတ်ဖွင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရှင်းပြချက်ပေး
ကျနော်တို့ပွင့်လင်းဆက်သွယ်ရေးအားပေးမည်ဟုနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလိုအပ်ချက်များကိုမှတဆင့်ခြေလှမ်းတစ်ခုပြုစုသူ (များ) နှင့်အတူပူးပေါင်း
ကျနော်တို့ကိုရှင်းပြနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့ဒေတာကိုသတ်မှတ်; ပေးမှန်ကန်သောဒေတာအဆောက်အဦများတက် setting ထဲမှာကူညီပေးဖို့လိုအပ်အသေးစိတ်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ QA သို့အဖွဲ့နှင့်အတူကန်-ချွတ်အစည်းအဝေးများလိုအပ်ချက်များကိုရှင်းပြနှင့်အခြားမေးခွန်းများကိုမေးရန်အခွင့်အလမ်းပေးဖို့ကိုင်
ကျနော်တို့တောင်းဆိုမှုများ troubleshoot နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းမမျှော်လင့်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ထွန်းလာသောအခါရှင်းပြချက်ပေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ?? UAT စဉ်အတွင်းစမ်းသပ် applications များ အသုံးပြု. ?? ဖြစ်စဉ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းအဖွဲ့နှင့် Clients များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းအဖွဲ့ကိုထောကျပံ့ - သူတို့ပေါ်ထွန်းအဖြစ်ဤမူဝါဒမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်တွေ့ဆုံပါဝင်ပတ်သက်သည်စခွေငျးငှါ
ကျနော်တို့ပူးပေါင်းနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်မူဝါဒမေးခွန်းများကိုအတူကူညီခြင်းနှင့်ကားအညွှန်း / သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်လိုအပ်သောထောက်ပံ့ပေး - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုန်ဆောင်မှုအသင်းကိုထောကျပံ့
သင်သည်အဘယ်သို့ ?? (အရည်အချင်းများ & ကျွမ်းကျင်မှု) ရတယ့်
critical (သရုပ်ခွဲ) စဉ်းစားတွေးခေါ်, ခြုံငုံကြီးမားသောရုပ်ပုံများအတွက်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စဉ်ယုတ္တိဗေဒ-based အသေးစိတ်ကိုသို့ကြည့်မျှော်
Professional ကမှန်မှန်: ထိထိရောက်ရောက်စည်းရုံးရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်မန်နေဂျင်းမျှော်လင့်ချက်များသွားလာယုံကြည်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပအဖွဲ့များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးသောပညာပေးနိုင်စွမ်း (လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, client များ, စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများ),
သငျသညျ (စံပြအရည်အချင်း / ကျွမ်းကျင်မှု) ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူသည်
အားလုံးအထက်တွင်ကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ရှာကြ၏။ တစ်ဦးကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနောက်ခံ (ကြှနျုပျတို့ညာဘက်လူတစ်ဦးသင်ပေးပါလိမ့်မယ်) မဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလွန်အားကောင်းတဲ့သုတေသနကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးနှင့်ခိုင်ခံ့သောသင်္ချာနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးစွမ်းရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီလိုက်ဖို့သုတေသနအပေါ်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖန်တီးသူတစ်ဦးယုတ္တိတွေးခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ (အဖွဲ့သည် & ယဉ်ကျေးမှု) အလုပ်မလုပ်ကိုမည်သို့
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ?? ကျနော်တို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအဖွဲ့များနှင့်ရုံးခန်းများအနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အပေါ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုကူညီပေးသည်။ ကျနော်တို့ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ကူးများ T သို့မဟုတ်အကြွေးရှာ ?? Don
အသုံးပြုသူမောင်းနှင် ?? ငါတို့သည်ငါတို့၏ client နှင့်အသုံးပြုသူများကိုနေရာ ?? တခြားအရာအားလုံးထက်အထက်လိုအပ်ရာများ။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖို့အရေးပါဆိုပါကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးပါပါတယ်။ ကျနော်တို့သူတို့အဘို့အလုပ်မလုပ် - ငါတို့သည်ကြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ခံစောင့်ရှောက်ရန်သတင်းပို့သူကို
လက်ကမ်း ?? ကျနော်တို့အမှုအရာကိုယျ့ကိုယျကိုတာဝန်ခံကိုင်အမြဲပြုရ, က၏အထူရ။ ကျနော်တို့ကကိုယျ့ကိုယျကိုပြုပါ, ငါတို့ ?? t ကိုကိုယ်စားလှယ် Don ကျနော်တို့ t ပြဿနာများ t ကိုစောင့်ဆိုင်း ?? Don
အတ္တကျော်သက်ရောက်မှု ?? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရလဒ်များကိုမဟုတ်ဘဲပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းပါ။ ဂရိတ်စိတ်ကူးများခေါင်းစဉ်နဲ့အဆင့်ဆင့်ကျော်အသက်ကြီးမှုရှိ, ကြီးစွာသောတွေးခေါ်ဖန်စီ pedigree outshine ။
အထဲတွင် ?? ကျနော်တို့ t ကိုငါတို့ကထူထပ်သောရသူတို့နှင့်အတူလုပ်, လုပ်ဖော်သို့မဟုတ် client များထုတ်တွက်ဆကြကုန်အံ့ ?? Don ။ ကျနော်တို့တိုင်းအသေးစိတ်အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကိုယျ့ကိုယျကိုအတွက်ဂုဏ်ယူ
ရှာဖွေနေရှေ့ဆက် ?? ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကြီးထက် ကျော်လွန်. ကြည့်ရှုပါ။ ကျနော်တို့ပြင်ပရှိစပီကာကြိုဆို, နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသို့သာပုတ်ပါ, သေချာကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်း ?? လာမယ့်အနာဂတ်-အထောက်အထား့သောအရာကိုသို့ပုတ်နေ ?? အောင်
ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ & အနီးကပ်ခညျြနှောငျ ?? ကြှနျုပျတို့သိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူတွေ ?? s ကိုမြေတပြင်လုံး-လူတစ်ဦးအကြောင်းကိုဂရုမစိုက်။ ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမည့်မိသားစုခရီးစဉ်နှင့်အကြိုက်ဆုံး after- အလုပ်အချိုရည် - ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြား ?? ့စီမံကိန်းကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကိုသိရ
ယခင်: ကွမ်တမ်: Xcellis များအတွက် Veritone aiWARE
နောက်တစ်ခု: ဂျာဗား Engineer- Big Data / တိမ်တိုက်န်ဆောင်မှုများ